समाचार – Page 4617 – Etajakhabar
नौ लाखमा किनेको ट्याक्सी ९ मिनेटमै खरानी ! हेर्नुहोस् ट्याक्सी चालकको दुखदायी कहानी (भिडियो)
ताजाखबर। नौ लाख रुपैयाँमा किनेको ट्याक्सी एकविहानै आफ्नै आँखा अगाडि जल्यो । तर, चित्रबहादुर खत्रीले केही गर्न सकेनन् । तीन वर्षअघि एसएलसी सकेर गाउँबाट काठमाडौं आएका खत्रीले आफैंले ट्याक्सी किनेर चलाउन थालेको साउन २ गते एक महिना भएको थियो । सोमवार एकाबिहानै बिप्लव माओवादीको बन्द सुरु नहुँदै बन्दकर्ताले उनको ट्याक्सी जलाए । भिडियोमा हेर्नुहोस् चित्र बहादुरको दुखदायी कहानी:
सैनिक कू पछि टर्कीमा अझैपनि पक्राउको क्रम जारी
अङ्कारा, १० साउन । गत जुलाई १५ मा टर्कीमा भएको असफल सैनिक बिद्रोहपछि टर्की सरकारले सरकारी कर्मचारी, सैनिकलगायत पत्रकारलाई समेत गिरफ्तार गर्ने क्रम जारी राखेको छ । सरकारी अधिकारीहरुका अनुसार ४२ जना पत्रकारविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको टर्कीस्थित अमेरिकी टेलिभिजन प्रसारण सीएनएनले आज जानकारी दिएको छ । टर्कीका अधिकारीहरुले सैनिक विद्रोहका पछाडि एकजना कारिन्दा तहका कर्मचारी फतुल्लाह गुलेनको हा...
राष्ट्रपतिले भेटिन् देउवा, प्रचण्ड र ओलीलाई
काठमाडौँ, १० साउन । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया र बदलिँदो राजनीतिक परिस्थितिका बारेमा परामर्श गर्न आज प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेतासँग भेटवार्ता गर्नुभएको छ । राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा करिब दुई घन्टा भएको परामर्शमा प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल स...
बाक्लो कुहिरो लागेपछि नौ दिनदेखि भोजपुरमा हवाई उडान बन्द
भोजपुर, १० साउन । लगातार पानी परेसँगै बाक्लो कुहिरो लागेपछि भोजपुरमा हवाई उडान बन्द भएको बताइएको छ । लगातारको वर्षात्सँगै हवाई मैदानमा बाक्लो कुहिरो लाग्नाले नौ दिनयता हवाई उडान हुन नसक्दा सर्वसाधारण निकै समस्यामा परेका छन् । खराब मौसमकै कारण गएको असार महिनामा नेपाल वायुसेवा निगमको तालिका अनुसार भोजपुर–काठमाडाँै १९ उडान हुनुपर्नेमा १४ उडान मात्र भएका थिए । त्यसैगरी भोजपुर–विराटनगर १४ उडान हु...
गोरखामा १ किलो नुनको मूल्य १५० रुपैयाँ
गोरखा, १० साउन । जिल्लाको सुगम क्षेत्रमा प्रतिकिलो नून रु २० मा पाइन्छ । ढिके नुनको भाउ प्रतिकिलो रु १५ रहेको छ । तर उत्तरी गोरखाको हिमालपारिका सात गाविसमा भने प्रतिकिलो नुनको मूल्य रु १५० नाघेको छ । सडक सञ्जालले नछोएका यी गाविसमा खाद्यान्नलगायत सामग्रीको ढुवानी खच्चडमार्फत गरिन्छ । बर्खा लागेपछि पहिरोले मनास्लु पदमार्ग अवरुद्ध हुँदा खच्चडमा गरिने ढुवानी बन्द हुन्छ । नुन, तेल, खुर्सानीको भाउ मह...
ट्राफिक जरिवाना रकममा भारी वृद्धि गरेपछि नियम मिच्नेको सङ्ख्यामा आधा कमी
काठमाडौँ, १० साउन । महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले ट्राफिक नियम मिच्ने सवारी चालकलाई जरिवाना गर्ने रकममा भारी वृद्धि गरेपछि नियम मिच्नेको सङ्ख्यामा आधा कमी आएको छ । महाशाखाका प्रहरी नायब उपरीक्षक तथा प्रवक्ता राजेन्द्रप्रसाद भट्टले सवारी जरिवाना बढाएपछि ट्राफिक नियमको पालना गर्नेको सङ्ख्या बढेको बताउनुभयो । “जरिवाना रकम बढाएपछि नियम मिच्नेको सङ्ख्या बिस्तारै घट्दै छ,” उहाँले भन्नुभयो । ट्...
मनाङ्गको २५ क्विन्टल उवा काठमाडौंमा
पोखरा, १० साउन । मनाङमा उत्पादन भएको २५ क्विन्टल उवा काठमाडौँमा लगेर बिक्री गर्न खरिद गरेर राखिएको छ । नेपाल खाद्य संस्थान अञ्चल कार्यालय पोखराले १०० क्विन्टल उवा खरिद गर्ने लक्ष्य राखेकामा यस वर्ष मनाङमा उत्पादन कम भएकाले २५ क्विन्टल मात्रै खरिद गरेर राखिएको हो । अञ्चल प्रबन्धक अम्विकाप्रसाद घिमिरेले बेसीसहर–चामे सडकको ठाउँ ठाउँमा पहिरो गई बाटो अवरुद्ध भएको र बाटो खुलेलगत्तै उक्त उवा काठमाडौँ ...
बाढी पहिरोबाट चीनमा भएको क्षतिप्रति देउवाद्धारा दुःख व्यक्त
काठमाडौँ, १० साउन । नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले चीनमा केही दिनदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण उत्तर तथा मध्यचीनमा आएको भीषण बाढीबाट १५० भन्दा बढीको मृत्यु, सयौँ मानिस बेपत्ता र अर्बौँको भौतिक सम्पत्तिको क्षति भएको घटनाले आफूलाई दुःखित बनाएको बताउनुभएको छ । नेता देउवाले आज विज्ञप्ति जारी गरी सो प्राकृतिक विपत्मबाट प्रभावितको उद्धार र राहत वितरणमा चिनियाँ सरकारले गरेको प्रयास सह्रानी...
रुखको जरामा अड्किएको अवस्थामा शव फेला
झापा १० साउन । गौरादह–५ स्थित गेउरिया खोलाले बगाउँदा स्थानीयवासी अनुज न्यौपानेको मृत्यु भएको छ । प्रहरीका अनुसार झापाको धुलाबारी घर भई गौरादहस्थित मावली घरमा बसेर पढ्दै आएका न्यौपाने आइतबार अपराह्नदेखि बेपत्ता थिए । आज बिहान इलाका प्रहरी कार्यालय गौरादहको टोलीले उनको शव खोलाको बीचमा रहेको रुखको जरामा अड्किएको अवस्थामा फेला पारेको जनाइएको छ । त्यसैगरी सोही वडाकै ३६ वर्षीय टेकेन्द्रबहादुर खड्का ...
निजी क्षेत्रलाई पेट्रोलियम आयात गर्न दिन माग
काठमाडाँै, १० साउन । सरकारद्वारा पेट्रोलियम तथा ग्यास कारोबार नियमन आदेश २०६९ खारेज गरी निजी क्षेत्रलाई पेट्रोलियम वस्तु आयात गर्नबाट वञ्चित गरेकोमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले दुःख व्यक्त गरेको छ । हालै सरकारले निजी क्षेत्रलाई पनि पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा सहभागी गराउने नीतिअनुरुप आयातकर्ता कम्पनीको छनोट समेत गरिसकेको सन्दर्भमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयद्वारा पेट्रोलियम तथा ग्यास कारोबार नियमन आदेश ...
Previous 1 … 4,616 4,617 4,618 … 4,919 Next
-20077 second ago
-18879 second ago
-17380 second ago
-16595 second ago
-15163 second ago
-13131 second ago
-12165 second ago